ORINASA FANALAMANGA : Manodidina ny 140 000 ha ny ala mbola azo trandrahina
Velaran-tanin’ ala mirefy hatrany amin’ny 140 000 hekitara no mbola azo trandrahina eo anivon’ny orinasa Fanalamanga any Moramanga, araka ny fanazavana noentin’ny tale misahana ny fitrandrahana eo anivon’ny orinasa Fanalamanga, Rakotondrainibe Charles Alfred. 6 mars 2019
Ny 110.000 hekitara amin’ireo dia alan-kesika raha toa ka alan-kininina kosa ny ny 30.000 ha. Nambarany fa azo hamarinina tsara ny fisian’io ala mbola azo trandrahina io ary efa misy ny sary mirakitra izany nalain’ny Foibe taosarintanin’i Madagasikara (FTM) tamin’ny alalan’ny fakan-tsary an’habakabaka. Sendika iray teo anivon’ity orinasa ity dia nilaza andro vitsy lasa izay fa zara raha misy 3000 hekitara sisa ny ala azo trandrahin’ny orinasa Fanalamanga.
Avy hatrany dia nandiso izany ny tarehimarika mirakitra ny refin’ny tany mbola misy ala azo anaovana fitrandrahana ao anatin’ny fiadidian’ny orinasa, izay heverina fa hanaratsiana endrika ny mpitantana. Voalaza fa mbola hatrany amin’ny 140 000 hekitara no ala azon’ny orinasa trandrahina tsara. Tsy azo ihodivirana fa tsy ho tapitra ao anatin’ny telo taona araka ny vaovao tsy marina miely ny asa fitrandrahana ataon’ny Fanalamanga. Ankoatra izay dia nohamafisin’ny tale misahana ny fitrandrahana eo anivon’ny orinasa Fanalamanga ihany koa fa nisy ny lafim-panarenana roa lehibe noentiny. Tafiditra tao anatin’ izany ny fanarenana ny lafiny ara-bola sy ny lafiny ara-teknika.
Manoloana ireo dia maivana ny tombony niditra tamin’ny orinasa nanomboka teo amin’ny nandraisany ny fitantanana hatramin’ny taona 2015 satria saika nibahan-toerana ny fanarenana sy ny fatiantoka. Ankilany, nisy ireo ezaka vita tamin’ny alalan’ny fampiasana ny “image satelittaire ”, nivoaka tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny taona 2016 ihany koa ny “carte d’occupation du sol” vaovao. Noho ny gaboraraka teo amin’ireo mpitantana teo aloha dia efa miezaka mamerina amin’ny laoniny tsikelikely ny orinasa ireo mpitantana ankehitriny.
Nambaran’izy ireo fa sarotra izany noho ny tsy fahombiazam-pitantanana nisy teo aloha izay tsy mba nanaja ny drafi-pitrandrahana. Tamin’ny taona 1975 no niforona ny orinasa Fanalamanga. Mpiasa raikitra miisa 900 mahery eo ho eo no mampihodina ny orinasa.